War kasoo baxay taliska AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamadan ka howgali doonaan gobolka Shabeellaha hoose, halkaasoo ay sugi doonaan amniga islamarkaana ka saari doonaan kooxda Al Shabaab.
Ciidamadan ayaa la xusay inay aad uga diyaarsanyihiin kuwii hore islamarkaana lasoo siiyay tababar sare, waxayna ka midyihiin ciidamada dalkaasi ee UPDF.
Taliyaha ciidamada Uganda Brig. Sam Okiding, ayaa xusay inay ku rajo weynyihiin sidii howgalkoodu u noqon lahaa mid guulaysta inkastoo uu sheegay inay ogyihiin khataraha kaga imaan kara dhinaca kooxda Al Shabaab, isagoo tilmaamay inay aad u diyaarsanyihiin islamarkaana isaga filanyihiin dhib kasta oo soo foodsaara.
Dalka Uganda ayaa ah waddanka ugu badan ee ciidamadiisu joogaan Somalia, waxaana ku sugan ku dhawaad 7 Kun oo askari.
Bishii September ee sannadkii hore ayaa weerar kooxda Shabaab soo qaaday waxay ku beegsadeen saldhig ciidamada Uganda ku lahaayeen deegaanka Jannaale halkaasoo ay ku dileen ciidamo badan xeradiina la wareegeen.
MARKA, Somalia- Khasaaro kala duwan ayaa ka dhashay dagaal kharaar oo maanta dhexmaray kolonyo katirsan ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM iyo Mallayshiyaad katirsan kooxda Shabaab.
Dagaalka ayaa ka dhacay labo tuulo oo 32KM u jira degmada B ...
​Askari ka tirsan ciidamada AMISOM oo la xukumay
Soomaliya 04.08.2016. 15:24
​Ururka Al Shabaab oo la wareegay degmada Marka
Soomaliya 11.07.2016. 18:51
Soomaliya 07.07.2016. 20:45
​AMISOM oo ka hadashay Askarteeda la xiray
Soomaliya 06.06.2016. 16:11